musha More Media Personalities Bio Khloe Kardashian Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican terevhizheni ane zita remadunhurirwa ".Mucheche K ”.
Yedu Khloe Kardashian Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yehunhu hweAmerican media media, socialite, uye modhi inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwemunhu.
Zvikuru, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva yepfungwa dzake dzakasununguka uye kutendeseka kusingagumi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveKhloe Kardashian's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Khloe Kardashian Nyaya Yemwana - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
ZveBiography kutanga, Khloe Alexandra Kardashian akazvarwa musi we 27th waJune 1984 kuLos Angeles kuCalifornia, USA. Akanga ari wechitatu wevana vana vakaberekwa naamai vake, Kris Jenner uye baba vakaguma, Robert Kardashian.
Sangana nevabereki vaKhloe Kardashian.
Iyo nyika yeAmerica yechena machenza neArmenian, Shona, Scottish, Irish, German neDutch midzi yakakurira mumapfumi akawanda eLos Angeles pamwe chete nehanzvadzi dzake dzakakura, Kim naKourtney pamwe nehanzvadzi yake Rob.
Makore gare gare, akagamuchira kuwedzerwa kwehafu-hanzvadzi, Kylie naJenner mushure mekurambana kwevabereki vake uye kuroora kwaamai kuna Caitlyn Jenner (ainzi Bruce).
Kukura maari asi kuti ave mhuri inozivikanwa, Khloe aive bvudzi rechisikigo aine maficha epanyama aive akasiyana nevakoma vake vakuru.
Izvi zvakasimudza fungidziro yekuti Khloe aive Kardashian chaiye here kana kuti kwete. Nyaya yacho yakazoradzikwa nemuyedzo wababa mushure mekunge mhuri yawana mukurumbira makore akazotevera.
Khloe Kardashian Dzidzo:
Dzidzo yake inongoita zvidzidzo zvake paMarymount High School muLos Angeles. Akadzidza pachikoro asati asarudza kuenda kumba mushure mekunge hanzvadzi dzake dzapedza kudzidza.
Makore gare gare akasimbiswa Khole akataura kuti danho rake rekusarudza-kudzidzira dzimba dzekuchikoro rakaburitswa nekusurukirwa.
"Pakanga pasina chikonzero chokuti ndigare nokuti ndakanga ndisina shamwari."
Uyu musikana muduku akaenderera mberi neimba dzichikoro kusvikira awana GED yake pazera re 17 mugore ra 2001.
Khloe Kardashian Biography - Tsaona Yemumugwagwa:
Nguva pfupi mushure mekunge awana GED yake, Khloe akabatanidzwa mumatambudziko emugwagwa anotyisa akamupinza nepakati pemhepo yepamotokari yemotokari.
Nekuda kweizvozvo, Khloe akatambura kukuvara kwehuropi uye kurasikirwa ndangariro neiyi yekupedzisira ichiramba ichienderera kusvika nhasi.
Khloe, saka, ane tsika yekukanganwa zvinhu kazhinji, chiitiko chakamukurudzira kuda mubatsiri.
Kunyangwe zvakadaro, akaenderera mberi nehupenyu hwakajairwa uye pasina nguva refu, akazoonekwa nyeredzi muTV yekuratidzira uko vatori vechikamu vakakwikwidza kuve mamodheru.
Khloe Kardashian Bio - Simuka Mukurumbira:
Khloe akaramba asingazivikanwe uye aishanda kukambani yemhuri yake yemafashoni, DASH yakagadzwa mu2006.
Kuputsa kwake kukuru kwakauya gore rakazotevera muna 2007 zvichitevera kuburitswa kwaKim Kardashian ane mukurumbira s3x vhidhiyo pamwe newaimbova mukomana wake, Ray J, pamwe nesarudzo yemhuri yake yekubatsirwa nekuratidzwa kwakaipa nekutanga Kuramba Une Kardashians chaiyo terevhizheni.
The show iyo inogadzirwa neAmerican Idol host, Ryan Seacrest inopa ruzivo rwehupenyu hwaKhloe; hanzvadzi dzake, Kourtney naKim; baba vokurera Caitlyn Jenner (zvino Bruce Jenner) amai Kris Jenner; kusanganisira vanasikana vaviri vaduku vaKris naCaitlyn (panguva iyoyo Bruce); Kendall naKylie.
Khloe Kardashian Kufambidzana Nhoroondo:
Khloe Kardashian haasati aroorazve. Isu tinokuunzira yakatarisana nehupenyu hwehukama hwake kusanganisira chinyorwa chenhoroondo yake yekufambidzana, wanano yake yakakundikana uye hupenyu hwehukama hwazvino.
Chekutanga hwaive hukama hwake hupfupi nemuimbi weAmerican muimbi Stevie J. Pakati pa2005-2006. Ivo vaviri vakasangana uye kufambidzana pane imwe nguva Khloe aishanda semubatsiri wake.
Yakazotevera stint senge kudanana inosanganisira hukama hwaKhloe nemudiwa wake wekusekondari akatendeuka rapper, Romeo Miller (2007-2008), nyanzvi bhasiketi mutambi, Rashad McCants (2007 - 2008) pamwe nehukama hwake hwehukama newaimbova mutambi wenhabvu Derrick LaRon Ward mu2009.
Yaive gore rimwe chetero iro Khloe akaroora mutambi webasketball anozivikanwa Lamar Odom musi wa 27 Gunyana.
Mubatanidzwa wakauya mwedzi mushure mekunge vatanga kufambidzana, wakatora kudzikira makore mana akazotevera naOdom vachinetseka nekubiridzira uye kushandisa zvinodhaka.
Khloe akaenderera mberi kwenguva refu vasati varambana kuitwa vakuru mu2016 uye akange aine stints neFrench Montana pakati pa2014-2015, James Harden (2015-2016) naTrey Songz.
Iye iye zvino ane ukama husina hukama neCanada mutambikwi basketball Tristan Thompson. Mhirizhonga dzinotanga mu2016 dzine mwanasikana pamwe chete zita rinonzi True Thompson (akazvarwa muna April 2018).
Iyo yekupedzisira ichiri kunzwikwa nehupenyu hwehukama hweKhloe sezvaanonzi ane nyaya neTristan Thompson asi asina kugadzirira kuidana iyo inopera.
Khloe Kardashian Hupenyu Hwemhuri:
Khloe aiva akaberekerwa mumhuri ye5 uye ane 8 nehanzvadzi. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Khloe Kardashian baba:
Baba vaKhloe vanonoka Robert Kardashian. Akanga ari gweta rakakurumbira uye muvambi wemimhanzi nekambani yekushambadzira inozivikanwa seMovie Tunes Inc.
Robert akapa mweya mushure mekurwa kwenguva refu nekenza yegurokuro muna Gumiguru 2003. Mushure mekufa kwake, kambani yaaive nayo yakapihwa nhaka naKhloe nevanin'ina vake avo vakazotengesa.
Nezve amai vaKhloe Kardashian:
Amai vaKhloe, Kris ishamwari uye aimbova muridzi wechitoro chevana, Smooch.
Parizvino ari kuita basa rekugadzirisa mabhizinesi evana vake vane mukurumbira Kris pakutanga akaroorwa naRobert Kardashian (baba vaKhloe) kusvikira vaparadzaniswa mu1991.
Papera mwedzi mushure mekurambana, Kris akaroorwa nemutambi weOlympic- Caitlyn Jenner (uyo zvino anonzi Bruce Jenner).
Nezve Khloe Kardashian's Nhanho-Baba:
Nhanho-baba vaKhloe ndiCainlyn Jenner (akazvarwa William Bruce Jenner). Aive murume uye baba vasati vaita zita rake uye chinzvimbo chekuchinja chechikadzi musi wa25 Gunyana 2015.
Makore mazhinji shanduko isati yasvika, Caitlyn (ainzi Bruce) aive mutambi anokosha anozivikanwa nekuhwina mutambo we1976 Olimpiki decathlon kuUSA kuMontreal Olympic Games.
Nezve Vanin'ina vaKhloe:
Khloe ane vana vashanu. Dzinosanganisira:
Kourtney Kardashian, akazvarwa musi wa 18 Kubvumbi 1979. Ndiye wekutanga wehanzvadzi dzeKardashian uye modhi ane degree reBachelor muTheatre Arts.
Asides kubva pakuonekwa paKuchengeta Up NeveKardashians, Kourtney akabatana naKhloe mukugadzira masipinendi saKourtney naKim vanotora New York pamwe naKourtney naKhloe vanotora Miami.
Kim Kardashian, akazvarwa musi wa21 Gumiguru 1980, ndiye wechipiri asi akakosha nhengo yemhuri yakaburitswa s3x vhidhiyo yakabatsira kuunza mhuri yake mukurumbira. Iye akaroora nevana kuna Rapper Kanye West.
Rob, akaberekwa pa 17th yaMarch 1987 ndiye murume chete Kardashian anotsvaga baba vake. Uyo akapedza kudzidza kubva kuMarshall School of Business akaita sehanzvadzi dzake, huterevhizheni nezvinodiwa mune zvebhizimisi nemafashoni emagetsi.
Kendall Jenner, akazvarwa pazuva re3rd yaNovember 1995, ndiye wekutanga wehanzvadzi dzaKhloe. Iye akazvarwa mumubatanidzwa pakati paCainlyn Jenner (ipapo Bruce) naKris Jenner.
Kendall anotsikawo nzira dzehanzvadzi dzake nekushanda semuenzaniso uye achionekwa paKuchengeta NeveKardashians.
Pakupedzisira asi kwete kwete zvishoma Kylie Jenner, akazvarwa pazuva re10th raAugust 1997 kuna Caitlyn Jenner (akazova Bruce) naKris Jenner.
Kylie ndiye wekupedzisira paKardashian / Jenner hanzvadzi uye anoonekwa paKuchengeta NeveKardashians. Iye anozivikanwa zvakanyanya kuve akafuridzira iyo "Kylie Dambudziko" mushure mekuzadza miromo yake izere neyenguva pfupi yekuzadza.
Khloe Kardashian Biography Chokwadi - Untold Biography Chokwadi:
Khloe anodyidzana nehanzvadzi dzake pamabhizinesi ezvekuita pamwe chete nefashoni, mitsetse yerunako uye kukwidziridzwa kwechigadzirwa.
Zvinosanganisira chitoro chembatya, DASH, mazino ekuchena peni - Idol White, mutsara wembatya - K-dash uye fake tan chigadzirwa chinonzi Kardashian Glamour Tan.
Anowedzera kugadzira zvipfeko zveQVC neSears uyewo ane ruoko mu Quick Trim uye Perfect Skin mitsara yemiganhu.
Khloe anopawo zvido zvekunyorera nehanzvadzi dzake sezviri pachena mukubudiswa kwebhuku ravo Dollhouse uye bhuku - Kardashian Confidential.
Kunze kwekuonekwa paKuchengeta NevaKardashians iyo yaanoti inowana $ 40,000 pachikamu, Khloe akambobatana neX factor naMario Lopez apo mwaka wechipiri wemutambo wakaitwa mu2012.
Asati arambana neaimbove murume wake Lamar, Khloe aive neshoo yekubuda. Nezvehupenyu hwavo hunonzi "Khloe naLamar". Zvakare nekuburitsa kunhuhwirira kweunisex kunonzi "Unbreakable".
Khloe Kardashian Hupenyu hweMunhu:
Khloe ndiye akareba kupfuura vese masista eKardashian ane chitarisiko chakazara nemakakatanwa kubva paudiki.
Akapomerwa mhosva yekuita rhinoplasty pazera remakore gumi nemapfumbamwe uye kuvhiyiwa kuveza chimiro chake chinoshamisa, Khloe anoramba zvese nekurondedzera shanduko yake kuita zvechijairira maitiro.
"Izwi rekufunga" pakati pehanzvadzi dzake akambopedza mazuva matatu ari mutirongo nekuda kwekutyaira akafurirwa.
Zvakangodaro, akaenderera mberi uye ave kuzivikanwa kuve akanaka mukutsvinya, kuva nehunyanzvi nekuratidzira kwekusvinura-pfungwa kwakamuita mukurumbira pakati pevateveri veKuchengeta Up NeveKardashians.
Nezvezvinhu zvekutenda, Khloe anotsanangura semuKristu anofarira mazuva ano kuzvipira uye kuenda kuchechi nemitambo mune zvebhaibheri. Zvimwe zvinofadza zvinosanganisira kupedza nguva nemhuri, kubika nekuteerera mimhanzi.
Khloe Kardashian Mararamiro:
Khloe iye zvino anogara nemukomana wake Tristan Thompson paimba yavo iri nyore iri pedyo neCleveland, Ohio.
Muunganidzwa wemota dzake une mhando dzakakura seRange Rover, Porsche Panamera. Zvakare, Mercedes-Benz S65 AMG, Rolls Royce Drophead Coupe uye dema Porsche 911 Targa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Khloe Kardashian Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!